Topnepalnews.com | टी–ट्वान्टी महाभिडन्त आज, दबाबमा भारत-उत्साहित पाकिस्तान,कस्ले मार्ला बाजी ?
टी–ट्वान्टी महाभिडन्त आज, दबाबमा भारत-उत्साहित पाकिस्तान,कस्ले मार्ला बाजी ?
Posted on: May 03, 2016 | views: 256
काठमाडौं,चैत ६ । भारतमा चलिरहेको आइसिसी ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज आयोजक भारत र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल कोलकाताको इडेन गार्डेनमा नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने ८ बजे सुरु हुनेछ ।
न्यूजिल्याण्डसँग पहिलो खेलमा पराजित भएको भारत दोस्रो खेलमा पाकिस्तानमाथि जित दर्ता गर्दै खाता खोल्ने प्रयासमा हुने छ भने पाकिस्तान दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पाकिस्ताले भने पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो। भारत र पाकिस्तानबिचको खेललाई दुवै देशका खेलाडी र समर्थकले जित हार भन्दा पनि प्रतिष्ठाको लडाईँको रुपमा लिएका छन् । भारतलाई प्रतियोगितमा रहने सम्भावना बलियो बनाउन यो खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
आईसीसीका ट्वान्टी ट्वान्टी वा ५० ओभरको विश्वकप क्रिकेटका खेलमा पाकिस्तानले अहिलेसम्म भारतलाई पराजित गर्न सकेको छैन। त्यसैले पनि पाकिस्तान भारतलाई हराउँदै इतिहास रच्ने दाउमा हुनेछ। भारत र पाकिस्तान एक दिवसीय तथा ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकपमा अहिलेसम्म १० पटक प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । ती सबै खेलमा भारत विजयी भएको छ । पाकिस्तान शनिबारको खेलमा भारतलाई हराउँदै यो एकोहोरो इतिहासा रोक्ने पक्षमा छ ।
एक दिवसीय विश्वकपमा ६ पटक खेलको खेलमा सबैमा पाकिस्तान हारेको छ । यस्तै ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकपमा अहिलेसम्म खेलका चार खेलमा पनि भारतले पाकिस्तानलाई हराएको छ । टी–२० र एकदिवसीय क्रिकेटको विश्वकप समेत गरेर भारत–पाकिस्तानबीच अहिलेसम्म विश्वकपमा १० भिडन्त भएको छ । त्यसमध्ये ९ खेल पाकिस्तानले जितेको छ । डर्बनमा २००७ मा भारत र पाकिस्तानबीचको खेल भने बराबरीमा टुंगिएको थियो ।